कैवल्य मुक्तिको (सदाशिवको अनुभव) – kamalsfabulous.com/community
नमस्कार, म बालकुमारी भण्डारी मेरो घर पुरुन्चौर -३, काउरे हो । हाल पोखरा ३ नदीपुरमा बस्छु ।आज म यस ब्रम्हज्ञानको CLASS मा आएको १ बर्ष भयो । मलाई मेरी माइजूले र दिदिले यहाँ ल्याउनु भएको हो । आज यस क्लासमा जीवन कै अचम्म अनुभव भयो (2073-10-22) । हिजो आज मलाई बिहानै बाट कस्तो कस्तो नैलो अनुभव भएको थियो । हरेक क्षण साथमा शिवजी हुनुहुन्थो । मुखमा कविता गीत भजन शिवजी कै मात्र आएको थियो | शुक्रबार नै शनिबार सदाशिव जाने हो भन्ने भाव आएको थियो । दिउसाे २:३० बजे म घरबाट निस्कन लाग्दा बाल्कु सदाशिव जाने हो आज ? भन्दै जिस्काउनु भयो शिवजीले । म किचनमा काम गर्दै थिएँ, शिवजीले भनुभयो “मलाई घरी घरी किन बोलाएकि ? ” । मैले भने “शिवजी हजुरसंग एक्कै छिन हजुरलाई समाएर रुने मन छ अनी बरू जानु हाेला “। लगभग चार बजे तिर CLASS मा गएँ । १–२ दिन पहिल्लै देखि शिवजीलाई भन्ने गर्थेँ शिवजी मैले सबैलाई छाेडीसकेँ, घर, परिवार, नाता सम्बन्ध, रिस, राग, डाहा ,मोह …..सबैबाट टाढा छु । शिवजी मलाई सदाशिव लैजाँदा अरुको जस्तो लामो नगरि दिनुस । दिउँसै नै सुरु गरि छिटै सकाइ दिनुस । मेरो मन एकोहोरो भैइसको छ हजुरसंग घुम्न जान र सदाशिवको अनुभव गर्ने भनेर । घरबाट हिड्न लाग्दा कसैले आज नजाने तँ भनेर भनेकाे थियाे मन भित्रबाट भने कसैले आज सदाशिव जाने हाे भनेर भनेका थिए मन भित्रै बाट | तर मैले कस्ले कस्ले भन्याे भनेर वास्तै गरिन । घरबाट निस्कने बेलामा सुरूमा अर्कै ज्याकेट लगाएकि थिएँ । यदि म अाज सदाशिव जाने भएँ भने क्यामरामा खिच्छन् भनेर अर्काे राताे ज्याकेट लगाएँ । CLASS मा गएपछि, निक्कै डर लाग्यो । डाक्टर कमल मान श्रेष्ठ मामाले मलाई हेर्दा पनि डर लागेको र मुटु कामे जस्तो भथो ।
दिउसाेको पाँच बजे पछि उहाले मलाई हट सिटमा राख्नु भो सुरुमा एकदमै डर लाग्यो मुटु ढुक ढूक गरेर, थर थर भएको थियो । मलाई हात जोड्न लगाउनु भो । मैले हात जोडि अाँखा चिम्म गरेर बसेँ । एक छिनपछी अचानक मेरो घरको आगन वरिपरि एक बुढि पछेउरा ओडेर यताउता गरेको देखेँ, मैले साेधेँ, तिमी को हो ? उनीले भनिन म तेरो बुढो (रमेश) कि हजुर आमा हुँ । मैले साेधेँ किन आउनु भएको हाे ? कहिले आउनु भो ? हजुर मर्नु भएको हैन र ? उनीले भनीन म कहाँकाे मर्नु, म ता यहीँ छु, मेरो शरीर लगेर जलाए मैले देखिराथेँ । मेरो क्रिया गरे, श्राध्द पनि गरे, मलाई सबै थाहा छ । त्यसपछि म मेरी छोरीकोमा आएँ, म कहाँ जाम त ? कसैले पनि देख्दैनन्, मलाई कति गारो भएकाे छ भनिन् । मलाई चुरोट खान मन छ । मैले मरे देखि आज सम्म केही पनि खाएकि छैन । यस पछि छेउमा उभिएर मलार्इ याे गर्न सिकाइरहनु भएकाे डाक्टर मामाले चुरोट दिनुभयाे । मामाले साच्चैकै चुराेट दिनुभएकाे ट हाेइन तर मामाले मामाले जे जे भन्नु हुन्थ्याे मेराे अगाडि त्यही त्यही अाउथ्याे । त्यसरीनै बुढीकाे अगाडि चुराेट लाइटर अायाे । बुढिले मज्जाले चुरोट तान्दै खाइन् र भनीन म अब जान्छु, कहाँ जान्छाै भनेर मैले भन्दा, मेरो बगर घर छ, कहिले एता कहिले गाउँ छोरा छोरी जाहा छ्न म पनि त्यही जान्छु भन्दै गइन|
यस पछि अब शुरु भयो मेरो यात्रा । त्यसपछि अाँखा चिम्म गर्दा म बिन्ध्बासीनी माताको अगाडि थिएँ |सुरुमा माताले खुट्टा देखाउनु भयो, मैले मामाको निर्देेशन अनुसार माताको खुट्टामा ढाेग गरेँ, माताले उठ भन्दै मेरो हात समाउदै अगाडिको चैतारामा ल्याउनुभयो। माताले रातो साडी लगानु भएको थियो । माताको कपाल हल्का अगाडि आएको, टिका, कानमा झुम्का, अाँखामा गाजल, लालि एक दमै उज्यालो थियो उहाँको अनुहार । माताले मलाई भनुभयो जाने हो ? मैले भने जान्छु, म संग स्कुटरकाे चापी माग्नुभयो र माताले स्कुटर चलाएर हामी लेकसाइड पुगेम (मलाई साच्चिकै स्कुटरमा बसेको अनुभव भएको थियो) माताले भन्नुभयो हामी ताल बराही मन्दिरमा जाने हो । के मा जानी भनेर डुङ्गामा कि स्कुटरमा भनेर साेध्नुभयाे । मैले स्कुटरमा जाने भनेँ । माताले मलाई स्कुटरमा लिएर पानीमा छीरिरीरि पार्दै ताल बराही माताकोमा लानुभयाे । ताल बराही माता हामीलाई लिन तालको किनारामा आउनुभएकाे थियाे र माता माता अङगालो मार्नुभयो । मलाई ताल बराही माताले हात मिलाउनु भयो । उहाँको हात अति कोमल थियो | उहाँले साडी लगाउनु भएको, कानमा झुम्का, नीधारमा टिका,अाँखामा गाजल, गालामा लाली थियाे । उहाँ यति राम्री हुनुहुन्छ कि बयान गर्न शब्द नै छैन । माताले मन्दीर अगाडि एउटा टेबुलको र दुईभागमा कुर्ची राख्ननु भयो र हामीलार्इ बस भन्नुभयो । टेबलकाे एकातीर ताल बराही माता र अर्कोतीर बिन्ध्बासिनी माता र म बसे । माताले हामीलाई दुधकाे चीया पीउने भनेर ल्याउनु भयो । चिया कत्ती मीठो थियो । माताहरु एक आपसमा गफ गर्ने लाउनुभयो । एउटा कागजमा के के लेखेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्याे । त्याे त मलार्इ सदाशिव लाने के नलाने वा कहिले लाने भनेर सल्लाह गर्नु भएकाे रहेछ । त्यस सम्झाैता पत्रमा मेराे नाम र सदाशिव जाने भनेर लेखेकाे रहेछ माताहरूले सहि गर्नु भयाे अनि मलार्इ देखाउनु भयाे । मैले हेर्दा त्यहाँ मङ्गलबार लेखेर डेटमा डट डट थियाे । त्यस दिन शनिबार थियाे । त्यस कागजअनुसार मेराे सदाशिव जाने दिन अर्कै दिन थियाे । मामाले हाँस्दै के गर्छाै त अब भनेर भन्नुभयाे । मलार्इ थाहा थियाे कि भगवानहरू ख्याल ठट्टा पनि गर्नु हुन्छ कहिले कहिँ । हामीले उहाँहरूलार्इ नजिकबाट पाउन सक्याैँ भने उहाँहरूसँग कर गरेर केही माग्न पनि मिल्छ भन्ने कुरा क्लासमा अरू सिनियरहरूले कहिले कहिले गरेकाे देखेकाे थिएँ । अनि मैले कर गरेर हुँदैन माता म त अाजै जाने हाे |सदाशिव भनेकाे उहाँहरूले हुन्छ त नि भन्नु भयाे । यस पछी शिवजी आउनुभयो । उहाँले कपालकाे जट्टा बाध्नु भएको, जटामा चन्दमा लगाउनु भएको, कानमा कुन्डल, निधारमा सेतो लाइन लाइनको टीका, हातमा त्रिशूल, बाघको छाला लगाउनु भएको, खुट्टामा खराउ लगाउनु भएको थियो । शिवजीले मलाई त हिड अब भन्नुभयो । मैले शिवजीको हात समातेँ । एकै छिनमा हामी ताल वारि आयाैँ । शिवजीले एक छिन तिम्राे पसल भएकाे तिर घुम्न जाअाैँ भन्नुभयाे । शिवजी र म लेक साइड तिर घुम्दै हिड्याैँ । एक छिन पछि अब कति हिड्ने भन्दै गाडी बोलाउनु भो । गाडी ठुला ठूला पाङगा भएको, दुई वटा मात्रै सिट भएकाे माथि खुला भएको थियाे । हामी गाडीमा चढेउँ । गाडी शिवजीले चलाउनु भयो । हामी धेरै टाढा गए जस्तै भएको थियो । गाडीबाट झरी फेरि हीड्दै थियोैँ त्यहाँ ठुलो चउर आयो । हामी अगाडि बढ्दै गएम, जाँदा जाँदै ठुलो भिर आयो, एता र उता ठुलो ठुलो डाँडाहरु थिए, तल गहिरो न गहिरो पानी नै देखिएको थिएन ।साघुँरो बांसको जस्तो पुल थियो, पुल हल्लाउँदै भन्नुभयो छिटो आउ छिटो । मलाई एकदमै डर लागिएको थियो । म बिस्तारै बिस्तारै गएँ, शिवजी अगीअगी म पछी पछी …..। केही पर पुगेपछी भन्नुभयो तिमीलाई थकाइ लाग्यो होला बसम खाजा खाम, हामी ट्रेकिङ्ग आएको हाे भन्दै कोकाकाेला, चिउरा, दाल्माेट र केक झोलाबाट झीक्दै खाऊभन्दै दिनुभयो । हामीले खाजा खाए पछि प्लास्टिक समेलेर झोलामा नै राख्नुभयो शिवजीले र ल हिँड भनुभयो । ठुलो जङ्गल देखाउदै हामी त्याे भन्दा पनि पारि जाने हो भन्नुभयाे । हामी खेत खेतको बाटो जाँदै थिएम, एउटा ठुलो कुलो आयो, शिवजी त फुत्त जानुभयो म ता जान्नै सकिन। एक्का एक रुन मन लायो, एक्लै भएको जस्तो महसुस भयो, पारि शिवजीले कुर्नु भएको छ मलाई जानै मन लागेन । मैले पछाडि फर्केर हेरेँ । मेरो पछाडि मेरो छोरा उत्सब रुँदै आएको, ममी न जाउन मलार्इ बाबाले पनि छोडेर गयो भन्दै अाएकाे थियाे । यसरी उसले ममी ममी भन्दै आयो म अति नै भाबुक भएँ र बाबुसंगै रोएँ म पनि । मेरो पछाडि मेरो श्रीमान, बाबा, ममी, दाइ, दिदी, बहीनी, भाइ, सासू ससुरा, मामा माइजु, साथीहरू सबै आएका थिए र मलाई नजा भन्दै थिए । सबैसँग म सजिलै बिदा भएँ तर छोरासंग बिदा हुन सारै गाह्रो भयो । डाक्टर मामाको निर्देशन अनुसार म सबैबाट बिदा भएँ र अगाडि फर्केँ । शिवजी मलाई पर्खेर बस्नु भएको थियो । मैले शिवजी भनेको उहाँले त्रिशूल समाउन दिनुभयो र मैले त्रिशूल समाएर पारि गएँ । हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भयो, अग्ला अग्ला सिँढी चढ्दै । पारि एउटा ठुलो सिसा नै सिसाको घर देखाउनु भएको थियो र हामी त्यस ठाउँमा जाने हो भन्नुभयो । यस पछी हामी जाँदै थियौँ बाटोमा एउटा “बार “(युनिक बार )आयो । हामी त्यहाँ गयौं । बार भित्र चारैतिर उज्यालो, रङगी चङगी बत्तीहरु घुमेका, बारको अगाडि तीर दायाँ भागमा सिसाले सजीएको दराज थियो । त्यस दराजमा (WINE,WHISKEY)बिदेशी, नेपाली, रक्सीहरु थिए, टेबल कुर्ची मिलाएर राम्रोसंग राखीएको थियो । शिवजीले मलाई एउटा टेबुलमा राख्न्नु भयो र के खान्छेउ भनुभयो । दुई वटा गीलासमा वाइन, कुखुराको मासु, हाँसकाे छाेइला, काँक्रो, गाजर, दालमोट …..धेरै प्रकारका खाने कुराहरू दिनुभयो । हामी संगै सँगै खायौँ । मलाई त वाइन लागेछ म त नाच्न पो थालेँ, शिवजी र म बारमा गएर नाच्दै रमाइलो गरियो, म त कति पटक लडेको जस्तै भएको थियो । पछी शिवजीले मलाई कागती पानी दिनुभयो । त्यस पछि मलार्इ रक्सिले अलि छाेड्याे । हामी त्यहाँबाट पनि निस्कीयै । अब अगीको आकाशको सीसैसीसाको घर देखाउनु भयो ।हामी अगाडि बढयौ, त्यो भबनको अगाडि फुलै फुलले सजीएको, गेटमा दुई तीन हनुमानजीले स्वागत गर्नु भएको थियो । छेउमा गएर मेरो बुढि औला समाएर शिवजीले इन गराइदिनु भयो । त्यस घरमा भित्र पस्न फिङ्गर प्रिन्टकाे काेड सिस्टर रहेछ । गेट खुल्याे हामी भित्र गयौँ । ए प्रभु !!! भित्र त कति उज्यालो कति, सबै सीसा जस्तै टल्केका थिए तर उज्यालोको कुनै असर परेको थिएन, सेतो हजाराैँ लाईट एकै साथ बलेकाे जस्तै थियो । शिवजीले भन्नुभयो यो ब्रह्म हो । यहाँ तिमीलाई जे चाहिन्छ त्याे सबै पाइन्छ । अती सुन्दर, चारैतिर हरियाली थियो, फुलहरु फुलेका, किचन, बेड रुम, बाथरुम, तातो पानी, चिसो पान …… मानिसलाई चाहिने सम्पूर्ण चिज त्यहाँ छ्न् । शान्त,आनन्द, स्वप्रकाश र चेतना यस्ता गुणले सजीएको छ ब्रह्म । शिवजीले भन्नुभयो अब भयो पुग्याे तिम्राे रहर भन्नु भयाे । मैले नाइ अझै अगाडि जाने हो भनेँ । डाक्टर मामाको अनुसार ब्रह्म पुगेर अझै सदाशिवकाे अनुभव गरेकाे हुनुपर्छ भन्नुभएकाे थियाे । शिवजीसंग फेरि अगाडि गयौं । ब्रह्मकाे पछिल्लो गेटबाट हामी गयौं, फेरि ठुलो ठुलो खोला, जङ्गल ढुङ्गा भिर हुँदै गयौं । एउटा नदी आयो, शिवजीले मलाई हात समाएर पारि तार्नुभयो । मेराे लुगा भिजेको थियो । उहाँले भन्नुभयो यस्तो भिजेको लुगामा के जानी, लुगा फेरेऊ भन्न्ुभयाे । मैले हस भनेँ र हामी सपिङ्ग सेन्टरमा गयौं । शिवजीले मलाई ओभर कोट हल्का हल्का रातो, बुट जुत्ता खैरो, कालो पाइन्ट, निलो निलो खैरो खैरो ONE पिस, चस्मा किनीदिनु भयो । आफुले भने खैरो खैरो हाप टिसर्ट, जिन्स स्टायलकाे पाइन्ट, खैरो तुना भएको जुत्ता लगाउनु भो र मसंग सेल्फि खिच्नु भयो र तिम्रो मोबाइलमा पनि पठाइदिन्छु भन्दै हास्नु भयो । हामी त्यहाँबाट निस्कीयाैँ । शिवजीले बाइक लिएर आउनुभयो र मलार्इ हर्न बजाउदै बोलाउनु भयो । त्यहाँ बाट निस्कने गेट बाहिर मेरो बाबा, ममी, दाइ, दिदी, बहीनी, भाइ, छोरा, श्रीमान ,……….साथीहरू भाई, बैनीहरू अाएर नजा भन्न अाएका रहेछन् । म केही क्षण तिनीहरू सँग रुँदै बिदा हुन नचाहेर बसेँ । शिवजी हर्न लगाउनु भयो । डाक्टर मामाको अनुसार फेरि सबैबाट बिदा भएँ । ठुलो चाख्लो लामो रोडमा शिवजीसंग बाइकमा गएँ । साह्रै मजा रमाइलाे लाग्याे । वा जिन्दगी यस्तो पाे हाे भने जस्ताे लाग्याे । धेरै टाढा पुगेपछी बाइक रोक्नु भो हामी बाइकबाट झर्यो । शिवजीले पारि देखाउदै भन्नुभयो अब तिमी एक्लै जाउँ । म त झस्कीएँ । सबै छोडेर शिवजीको पछी लागेँ, अब शिवजी पनि छोडेर म कहाँ जाम, के गरुँ, हजुरलाई म छोड्दिन भन्दै रुन कराउँन थालेँ । म साच्चैकै राेएकि थिएँ ।शिवजीले मलाई संझाउनु भयो । जीवन यहीँ हो । जे थियो, जे भयो सबै बिर्सनु पर्छ, अब तिमी जाउ भन्नु भयाे । यस पछि शिवजीसंग पनि बिदा लिएर अलि अगाडि के पुगेकी थिएँ एउटा घुमीरहेको बन्द कोठा जस्तोमा पुगेछु । त्यहाँ बाट यता तिर निस्कदा त म त एका एक लस्टि जस्तो पो भएँ । अाफुलार्इ साँच्चैकाे सानोसानो हुँदै, मसीनो मसीनो भएको अनुभव नै भएको थियो । मैले घर परिवार साथीहरू सम्झदा म ठुलो ठुलो हुन्छु, बिर्सीदी सानो सानो हुन्छु । यो एक जीवनकै अचम्मको अनुभवकाे क्षण थियाे ।
यसरी म अगाडि बढ्दै गएँ । म त एउटा सेतो सानो बल भएँ । शिवजीले हातमा खेलाउदै खेलाउदै, भन्नुभयो फाल्दिम ? केही समय पछि त्याे बाेक्रा नभएकाे अण्डा जस्ताे बललार्इ अाफ्नाे पछाडि फाल्दिनु भयो । त्याे अण्डा फुटेर एकदम सानाे अावाजमा प्याट्ट गरेकाे अावाज अाएकाे थियाे । त्याे बल हरायाे म त हावामा पो छु । म त हावासंग मिसिएर अाफैलार्इ हराएकाे बिलाएकाे अनुभव भयाे । संसार भन्दा छुट्टै जस्तो भएँ । अाफ्नाे वजन पनि छैन, अाफ्ना नाता, इष्टमित्र, साथीभाइ, तेराे मेराे, सुख दुःख केही थिएन । मैले शिवजीलार्इ फर्केर हेरेँ । शिवजी म भन्दा पछाडि उता फरकनु भएकाे थियो । मैले यो के हो शिवजी भन्दा कैवल्य मुक्ति भन्नुभयो र सदाशिवकाे अनुभव भन्नु भयाे । शिवजी तिर उज्यालो थियो, म तिर साँझ परेको थियो । शिवजीलार्इ सानो सानो छाया जस्तो देखिनुभएको थियो । छेउमा उभिनु भएकाे डाक्टर मामाले बाल्कु भन्दा कस्ले कस्ले बोलाए जस्तो भयो, कोही चिनेको छैन, म त अर्को ग्रहबाट आएकि हुँ भन्ठाने केही क्षण त ।
यसरी मैले मुत्यु पछीको जीवन को बारेमा बुझ्ने र अनुभव गर्ने माैका पाए । शास्त्रमा भनेको छ भवसागर छ रे । भवसागर भनेको के हो ? कस्तो हुन्छ भनेर मैले अाज ब्रह्म र सदाशिवकाे अनुभव गर्ने बेलामा देख्ने माैका पाएँ । त्याे भवसागर के रहेछ हामी मानिसले यो जीवनमानै बुझ्न् आवश्यक छ रहेछ । अाज डाक्टर मामा, माइजु छेउमा बसेर सिकाउने र शिवजीले डाेर्याउदा पनी त्यहाँ देखिएका भिर, पाखा, डाँडा, नदी यति भयानक थिए कि कुनै पनि मानिसले त्याे पार गर्ने हिम्मत जुटाउन सक्दैन र किन पार गर्ने भनेर झन उध्देस्यनै नभएकाले त्याे पार गर्ने कुरै भएन । यस्ताे रहेछ हाम्राे मृत्यु पछिकाे यात्रा । हाम्रो तेस्रो नेत्र हुँदाेरहेछ त्यस तेस्राे नेत्रले यो अदृस्य संसार देखीने रैछ । डाक्टर कमल मान श्रेष्ठ (मामा), डाक्टर इन्दु श्रेष्ठ (माइजु )लाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेराे राधा माइजू र गिरधारी मामालाई धन्यवाद, मलाई यो ठाँउसम्म आइपुग्दा सहयोग गर्नुहुने सम्पुर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।।।।
सदाशिव कि जय ।।।
Author balkumariPosted on July 10, 2017 July 12, 2017
Previous Previous post: शिवजीसंग प्रश्न उत्तर कविता मार्फत
Next Next post: शिवजी र अजा को भलाकुसारी